4x6 halo nalka hore ee loogu talagalay Kenworth T400 T600 T800 W900B W900L, waxay la imaanayaan 55w 3500lm dogob sare iyo 30w 2800lm dogob hoose, halo drl cad iyo calaamado leexasho.
Nalka hore ee loo yaqaan 'Kenworth T800 Led Head Light' wuxuu la yimaadaa 6000K heerkul midab leh oo u dhow qorraxda dabiiciga si loo hagaajiyo hufnaanta aragtida wadista iyo kordhinta raaxada wadista. Wanaagsan waxqabadka biyaha iyo boodhka. Kiiska guriyeynta waara oo leh kuleylka kuleylka waxqabadka wanaagsan. Cufnaanta sare ee tamarta iyo iftiinka iftiinka si loo ballaariyo khadka aragtida, waxay kuu siyaadinaysaa xaalado waditaan aamin ah Nalalka Nalalkaaga Led ee loogu talagalay T800 Kenworth waxay leeyihiin adeegsi hooseeya, hufan, keydinta tamarta iyo astaamaha ilaalinta deegaanka. Waqtiga jawaabta / deminta korontada oo sarreysa, Nolol adeeg dheer ah in kabadan 50000 saacadood. Bareeso oo ciyaar, rakibidda fudud, badanaa waxay kugu kacdaa qiyaastii 15 daqiiqo rakibidda. Waxay ku habboon tahay Kenworth T800 T400 T600 W900B W900L classic 120/132 HK classic.
Qeexitaanka Nalalka Nalka Led ee Kenworth T800
Astaamaha Kenworth T800 Lights Headlines
Waxaan hayaa 1996 Freightliner Fld 120 oo raadinaya inaan iibsado nalka hore ee laydhka oo leh shumaca dhaadheer oo aan ku ciyaaro fiilooyin dheeri ah.